Home » Lahatsoratra farany farany » People » Lotte Hotels & Resorts anarana anarana Tale jeneralin'ny Amerika vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Jim Petrus no nanendry ny CEO an'ny Lotte Hotels & Resorts Americas
Lotte dia mikasa ny hanokatra trano fandraisam-bahiny mihoatra ny 20 mandritra ny 5 taona ho avy, mikendry ireo tanàna vavahady manan-danja, ivon-teknolojia ary toera-piterahana any Amerika.
Jim Petrus dia mpitarika indostrialy 30 miampy taona izay nitana andraikitra ambony tao amin'ny Blackstone / BRE Hotels and Resorts, Starwood Hotels and Resorts ary Hyatt Hotels.
Lotte amin'izao fotoana izao dia manana fananana 34 mitotaly efitrano 11,200 miaraka amina fananana 3 fanampiny ao amin'ny fantsona.
Ny fanendrena an'i Petrus dia mifototra amin'ny fanoloran-tena amin'ny marika Koreana Tatsimo hamorona traikefa tokana sy mahavariana ho an'ny vahiny any Amerika.
Lotte Hotels Corporation nanambara androany fa voatendry ho Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Lotte Hotels and Resorts Americas i Jim Petrus, avy hatrany. Petrus dia mpitarika indostrialy 30 miampy taona izay nitana andraikitra ambony tao amin'ny Blackstone / BRE Hotels and Resorts, Starwood Hotels and Resorts ary Hyatt Hotels. Ny fanendrena an'i Petrus dia mifototra amin'ny fanoloran-tena amin'ny marika Koreana Tatsimo hamorona traikefa tokana sy mahavariana ho an'ny vahiny any Amerika.
Lotte Hotels & Resorts niditra tao amin'ny tsena amerikana avaratra tamin'ny 2015 niaraka tamin'ny fahazoana ny hotely Lotte New York Palace manhattan malaza ary nanitatra ny dian-tongony tamin'ny taona 2020 tamin'ny fisokafan'ny Lotte Hotel Seattle. Lotte dia mikasa ny hanokatra trano fandraisam-bahiny mihoatra ny 20 mandritra ny 5 taona ho avy, mikendry ireo tanàna vavahady manan-danja, ivon-teknolojia ary toera-pizahana any Amerika. Lotte amin'izao fotoana izao dia manana fananana 34 mitotaly efitrano 11,200 miaraka amina fananana 3 fanampiny ao amin'ny fantsona. Ny marika Lotte Hotel dia misy an'i Signiel, marika marika kintana 6; L7, ny fomba fiainany; ary Lotte Hotels, marika sonian'izy ireo.
“Nandritra ny asan'i Petrus nalaza dia izy no nanampy tamin'ny fananganana ny kolotsaina sy ny tetikady ara-barotra tsara indrindra ho an'ny marika rehetra nokasihiny. Izahay dia manana fanantenana be amin'ny zavatra rehetra natolotr'i Jim ho an'ny Lotte Hotels & Resorts ary faly izahay manana azy hitondra ny taranaky ny fahombiazana ho an'ny marika any Etazonia, hoy Andriamatoa David Kim, filohan'ny Lotte Hotel Corporation sy CEO. "Fantany ny orinasantsika, ny orinasanay ary ny olontsika, ary matoky aho fa izy no mpitondra mety hampandroso ny kolontsaintsika sy ny orinasantsika."
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Lotte Hotels & Resorts, Petrus dia niaraka tamin'ny Blackstone / BRE Hotels and Resorts izay izy no filoha lefitra zon'ny Asset Management- Hawaii Hotels and Resorts. I Petrus koa dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny Starwood Hotels and Resorts ao anatin'ny marika St. Regis ao anatin'izany ny Global Brand Leader sy ny filoha lefitra zon'ny Operations. Talohan'izay dia nitana andraikitra ambony ambony tamina Hyatt Hotels izy. Nandritra ny asany dia nitana andraikitra ara-tsosialy sy indostrialy maro be koa i Petrus. Petrus dia nahazo diplaoma tamin'ny sekoly fandraisam-bahiny tao amin'ny State University Michigan.
"Voninahitra ho ahy aho omena fotoana handray ny lohany amin'ny Lotte Hotels & Resorts any Amerika," hoy Andriamatoa Petrus. “Hitako fa mety be dia be ny marika Lotte Hotel misy anay, ary faly aho manana ny fahafaha-mampahafantatra ireo marika ireo na amin'ny tsena fitetezam-bidy na fomba fiaina eto amin'ity zoroan'izao tontolo izao ity. Miaraka amin'ny fanohanan'ny ekipanay miavaka any Korea dia matoky aho fa hampandroso ny paikady fanitarana izay efa napetrakay ankehitriny, sady hiorina amin'ny kolontsaina mampiantrano vahiny miavaka ary hanome fahafaha-mivoatra vaovao ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, ny vahiny ary ny mpampiasa vola. "